Semalt: Torohevitra momba ny fomba hisorohana ny tsetsatsetsa Comment amin'ny WordPress
Ny fikarakarana ny mpihaino sy ny fanamafisana ny fandraisana anjaran'ny mpampiasa dia tena manan-danja indrindra amin'ny resaka fivarotana. Ny maha-zava-dehibe ny fizarana tsikera ao amin'ny tranonkalanao dia tsy azo odian-tsy hita. Amin'ny sehatra fanehoan-kevitra, afaka manomboka haingana ny resadresaka an-tserasera ianao ary hamakafaka ny valin'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy.
Andrew Dyhan, manam-pahaizana lehiben'ny Semalt, dia mamaritra izay tokony ho fantatra momba ny Askimet.
Taorian'ny nametrahana WordPress tao amin'ny tranokala, ny mpanjifa dia mahazo Askimet ho iray amin'ireo endri-panandevozana. Betsaka ny mpikaroka momba ny varotra no mametraka WordPress fa tsy mavitrika ny asan'ny Askimet. Ny fanakanana sy fisorohana ny spambots dia asa-do-it-yourself izay azonao atao haingana eo amin'ny biraonao eo an-toerana.
Tsy mahafinaritra ny fitadiavana spam amin'ny tranokalanao. Askimet dia novolavolaina sy notontosain'ny mpanorina WordPress. Askimet dia manampy ireo mpanolo-tsaina momba ny varotra mba hanamarihana sy hamantarana ireo fanamarihana spam. Rehefa avy nametraka sy namantatra ny tsikera fanamarihana, nanolotra ny tsetsatsetsa ho an'ny mpividy ireo mpanolotra tranonkala Askimet. Eritrereto ny famandrihana ny Application Programing Interface (API) momba ny fampiharana (API) ary hamakafaka ireo fanamarihana spam anao isan-kerinandro.
Ny Antispam Bee
Ny antispam bee dia iray amin'ireo plugins izay ambony indrindra izay manampy amin'ny fisorohana ny fanamarihana spam amin'ny WordPress. Aorian'ny fampiharana ny tantely Antispam, tsy misy ny famantarana ilaina. Mampiasa ny antontam-baovao manohitra ny spam ny Antispam bee mba handinihana fanamarihana. Ny antispam bee koa dia manamarina andalan-tsoratra izay fanamarihan'ny mpitsidika. Raha toa ny mpanjifa mety haneho fanehoan-kevitra avy hatrany taorian'ny nandefasana hafatra, dia ny tenimiafin'i Antispam no milaza ny fanehoan-kevitra Spam WordPress.
Ny fanamarinana ReCaptcha
Antsoina koa hoe Google Captcha, i ReCaptcha dia manampy ireo mpividy mba hananganana kapila, fanamarihana sy fahazoan-dàlana momba ny fisoratana anarana. Ny Google Captcha dia mitaky ny endriky ny endriny hanamarina ny mombamomba azy alohan'ny ahafahany miditra amin'ny tranonkala iray. Ity dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra ampiasain'ny mpivarotra mba hisorohana sy hanakanana ny spam WordPress.
Diniho ny fametrahana sy ny fampiakarana ity plugin ity mba handehanana. Ampahafantaro ny endrikao mba hahazoana valiny mahasoa. Raha te hizaha raha marihina ao amin'ny tranonkalanao WordPress ny fanehoan-kevitra, mialà ary manandrama mandefa tsetsatsetsa.
Fanavakavahana Trackbacks amin'ny WordPress
Taona vitsy lasa izay, ny fampiasana finday dia matetika ampiasain'ny mpandraharaha sy mpitoraka blaogy amin'ny fifandraisana. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa trackbacks ny spam mba handefa spam amin'ny site WordPress. Mba hiatrehana ity karazana WordPress ity dia tsidiho ny fanesorana ny trackbacks amin'ny tranokalanao.
Mba hisakanana ny trackbacks amin'ny tranokalanao WordPress, mandehana ao amin'ny kaontinao 'Settings' ary tsindrio ny safidy 'Fifanakalozan-kevitra'. Tsindrio ny safidy eo ambanin'ny 'trackbacks sy pingbacks' mba hanafoana pingbacks sy trackbacks tsy ho tratranao ao amin'ny tranonkalanao. Ny WordSpam dia afaka manasitrana tanana isaky ny lahatsoratra ihany koa. Tsindrio ny tablr 'Discussions' mba hanafoana pingbacks amin'ny lahatsoratra manokana.
Esory ny rohy Nofollow amin'ny fanehoan-kevitra
Raha nampiasa rohy tsy manaraka ianao avy amin'ny fanehoan-kevitrao, dia diniho ny fanesorana azy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo mpampiasa aterineto sy mpandraharaha dia tonga any amin'ny heloka bevava ataon'i Google noho ny fampiakarana ny kalitao ambany sy ny fanehoan-kevitr'i Spammy.
Fametrahana fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratra taloha
Spam WordPress dia mety ho tezitra be. Raha manana fanamarihana ny fanehoan-kevitra teo aloha ianao ao amin'ny tranokalanao dia diniho ny fanakanana ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratra taloha. Sokafy ny 'Settings' ary tsindrio ny 'Dinika' ao amin'ny tranonkalan'ny fanamarihana ao amin'ny tranonkalanao mba hanakanana ireo fanehoan-kevitra momba ny votoaty izay navoaka taona maro lasa izay.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, WordPress spam dia fiahiana lehibe ho an'ny webmasters sy bilaogera. Aza avela haneho hevitra ny spam manimba ny fanentanana an-tserasera. Ampiasao ny fanitsiana sy ny plugins amin'ny WordPress mba hisorohana ny fanamarihana tsotsotra ao amin'ny tranonkalanao Source .